शरीरलाई स्वस्थ राख्न बिहान खाली पेटमा भिजाएर खानुहोस् यी चिज, हुनेछ तपाईंले नसोचेको फाईदा ! | सुदुरपश्चिम खबर
शरीरलाई स्वस्थ राख्न बिहान खाली पेटमा भिजाएर खानुहोस् यी चिज, हुनेछ तपाईंले नसोचेको फाईदा !
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ 44
हामीले खाने कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार बिहान केही चिज भिजाएर खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा हुन्छ। यसका लागि यी चीजहरू रातभर पानीमा भिजाएर बिहान खानुहोस्।
मेथीःमेथीको दानालाई भिजाएर बिहान खाली पेट खाइयो भने यो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर र फस्फोरस पाइन्छ जुन हाम्रो पाचन प्रणालीका लागि निकै फाइदा पुग्छ। खाली पेटमा भिजाएर मेथीको दाना खाँदा मधुमेह र अनियमित महिनावारीको समस्यामा फाइदा हुन्छ। यसका साथै दाँत र हड्डी बलियो हुन्छ।
बदामःभिजेको बदाम खाँदा स्मरणशक्ति बढ्छ भन्ने तपाइले सुन्नु भएको होला। तर भिजेको बदाम खाँदा अन्य धेरै स्वास्थ्य फाइदाहरू पनि छन्। बदाम प्रोटिनको धेरै राम्रो स्रोत हो र यसको दैनिक उपभोगले मांसपेशी बलियो बनाउँछ। भिजेको बदाम हरेक बिहान खाली पेटमा खाँदा पाचन प्रणाली पनि राम्रोसँग काम गर्छ।
आलसःबिहान खाली पेटमा आलसको दाना खानु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रोटिन, आइरन र ओमेगा ३ फ्याटी एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। आलसको दाना भिजाएर खाँदा खराब कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ र मुटु स्वस्थ रहन्छ। यसका साथै शरीरमा प्रोटिनको आपूर्तिका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ।
किशमिशःसुख्खा अंगुरलाई प्रायः दहि, खीर वा अन्य चीजहरूमा प्रयोग गरिन्छ। खानामा स्वादिलो ​​हुनुका साथै यो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। सुक्खा अंगुरमा पाइने पोटासियमले उच्च रक्तचापको समस्याबाट पनि छुटकारा पाउन मद्दत गर्छ। यसमा प्राकृतिक चिनी हुन्छ जसले स्वास्थ्यलाई हानी गर्दैन त्यसैले मधुमेहका बिरामीले पनि यसको सेवन गर्न सक्छन्। भिजाएर किसमिस खाँदा एनिमिया, मृगौलाको पत्थरी, छालाको समस्या र पेटको समस्याबाट पनि राहत मिल्छ।
मुङको दालःमुगको दाल प्रायः मानिसहरुले बिहान बेलुकाको खानासँगै खाने गर्छन्। यसलाई प्रोटिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत मानिन्छ। हरेक दिन बिहान भिजाएको मुगको दाल खाँदा धेरै स्वास्थ्यमा फाइदा हुन्छ। मुगको दालमा प्रोटिन, फाइबर र भिटामिन बी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यो खाँदा पाचन क्रियामा सुधार हुन्छ र कब्जियत र ग्यासट्रीकको समस्याबाट पनि राहत मिल्छ। gnewsnepal.com बाट सभार